तेस्रो ‘स’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
अम्लेटको एक ठूलो टुक्रा मुखमा हाले । अनि एउटा लयमा मुख चलाएर भने, ‘हेर्नाेस्, अहिले हामी तीन ‘स’को नीतिमा सावधानीका साथ चलिरहेका छौं ।’
जेष्ठ १२, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — कमरेड नेकपा अन्डरलाइनको केन्द्रीय सदस्य भएकोमा मलाई खुसी नै लाग्यो । यो उनको कम्युनिष्ट जीवनको अन्डरग्राउन्डदेखि अन्डरलाइनसम्मको सफल यात्रा थियो । र थप खुसीको कुरो के भने कमरेड नेपाल सरकारको एक शक्तिशाली मन्त्रीको सल्लाहकार पनि भएका थिए । अत: एक शुभचिन्तकको नाताले उनलाई तगडा बधाई दिन हिंँडेँ म ।
‘लालसलाम कमरेड ।’ मेरो चालु अभिवादन प्रत्युत्तरहीन भएकोले मैले दोहोर्‍याएर भन्नुपर्ने भयो, ‘लालसलाम कमरेड ।’
‘ए, भुसुक्कै बिर्सेछु ।’ उनले मेरो आँखामा हेरेर भने, ‘के साँच्चिकै कुनै
काम छैन ?’
कमरेडको कामप्रतिको यस्तो भक्तिभाव देखेर म दंग परेको थिएँ । के हाम्रा कमरेडहरू यतिका भीषण कामकाजी भइसके त ? यो त राम्रो हो । वास्तवमा मेरो भने कुनै काम थिएन । अब के काम भनु म ? तैपनि कमरेडको ‘कर्मनिष्ठा’लाई साथ दिन कुनै कामजस्तो त निकाल्नैपर्‍यो । यही विचार गरेर मैले भनेंँ, ‘म एक पुरानो पत्रकार भएकोले एउटा ताजा इन्टरभ्यु किन नलिने कमरेडको ?’
‘ए, तपाईको पत्रकारिता जारी छ ?’ कमरेड मुस्कुराए ।
‘जारी त छैन, तर चटक्कै बिर्सेको पनि छैन मैले कमरेड ।’
‘हामी राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठिसकेका छौं ।’ उनले परम सन्तुष्ट शैलीमा भने, ‘अब तपाई मसँग कामको कुरा मात्र गर्नाेस् ।’
‘लुकाउने कुरो होइन ।’ उनले सुस्तरी भने, ‘तर यसलाई कतै पनि छाप्नुचाहिँं नछाप्नु होला नि †’
‘हुन्छ कमरेड, भन्नोस् ।’
‘मेरो ससुरो सरकारी जागिरबाट रिटायर भइसक्नुभएको छ । उहाँलाई कुनै राम्रो ठाउँमा लगाउनैपर्‍यो । हङकङमा रहेको जेठानको एक्सपोर्ट–इम्पोर्टको बिजनेस छ । अहिले बैंक ठगीको एक केसमा फँस्नु भएकोले उहाँलाई मैले सहयोग नगरी भएन । मेरो सालोको आईएनजीओको काम छ । त्यसलाई अघि बढाउन कसरी मद्दत नगर्ने मैले ? यस्तै साली डाक्टरी पढ्न युएएस जान चाहन्छे । त्यसको पुरै बन्दोबस्त त मिलाउनैपर्‍यो नि !’ उनले एक सासमा भने, ‘अनि सासुको बोर्डिङ स्कुल त्यति राम्ररी चलिरहेको छैन । त्यसको लागि पनि केही न केही गर्नुपरेन त ?’
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०७:५२